သင်၏နောက်အဖြစ်အပျက်အတွက်တွစ်တာကိုအပြည့်အဝအသုံးချပုံ Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 3, 2014 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 3, 2014 Douglas Karr
ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်ပါဝင်ခြင်းကိုနှစ်သက်သော Twitter Chats တစ်ခုမှာ အနုမြူ Reach ရဲ့ # AtomicChat။ Twitter ပေါ်ရှိစျေးကွက်ရှာဖွေရေးခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးတွင်ကောင်းမွန်စွာထုတ်လုပ်ပြီးကြိုတင်စီစဉ်ထားသောချက်တင်စကားဖြစ်သည် 9PM EST မှာတနင်္လာနေ့တိုင်း။ ငါပါ ၀ င်သည့်အခါတိုင်း၊ ဒီအဖြစ်အပျက်အတွက်တွစ်တာဟာဘယ်လောက်ပြီးပြည့်စုံတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းသဘောကျမိတယ်။
Twitter ကဖြစ်ရပ်တွေအတွက်အရမ်းကောင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မယုံဘူး။ Julius Solaris ၏စာရေးဆရာ ဖြစ်ရပ်များအတွက်လူမှုမီဒီယာ (အခမဲ့ ebook!) က၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသည်ဟုယုံကြည်ပြီး၎င်းသည်သင်တစ် ဦး ဖြစ်လျှင်တွစ်တာကိုမည်သို့အကောင်းဆုံးအသုံးပြုနိုင်မည်ကိုဤအချက်အလက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်ကိုအတူတကွစုစည်းထားသည်။ ဖြစ်ရပ်မှန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်။ ပွဲအခမ်းအနားများ၊ ထုတ်ကုန်အသစ်များ၊ စည်းဝေးကြီးများ၊ ကွန်ဖရင့်များ၊ အားကစားပွဲများ၊ ကုန်စည်ပြပွဲများ၊
Twitter သည်ဖြစ်ရပ်ကျွမ်းကျင်သူများအတွက်အစွမ်းထက်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအချက်အလက်များသည်ဖြစ်ရပ်များအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ PR၊ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု၊ သုတေသနနှင့်ရောင်းရန်အတွက် Twitter ကိုအောင်မြင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ Julius Solaris ၏စာရေးသူ ဖြစ်ရပ်များအတွက်လူမှုမီဒီယာ.
Infographic သည်အဖြစ်အပျက်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ ၀ န်ဆောင်မှု၊ ပွဲကိုစျေးဝယ်ခြင်း၊ ဖြစ်ရပ်၏ဂုဏ်သတင်းကိုစီမံခြင်း၊ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုရှိခြင်း၊ အရောင်းတွင်ကူညီခြင်း၊ ဖြစ်ရပ်မှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာတိုက်ရိုက်လွှင့်တင်ခြင်းအတွက်အလွန်ကောင်းတဲ့အချက်ပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ Infographic သည်စာရင်းအင်းများကိုလည်းပေးသည်။ (ပွဲစီစဉ်သူများ၏ ၆၉% သည်၎င်းတို့၏အဖြစ်အပျက်များအတွက်တွစ်တာကိုအသုံးပြုကြသည်) နှင့်တွစ်တာကျင့်ဝတ်နှင့်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များအတွက်အကြံဥာဏ်ကောင်းအချို့ရှိသည်။
Julius ၏အခမဲ့စာအုပ်ကိုသေချာဖတ်ပါ ဖြစ်ရပ်များအတွက်လူမှုမီဒီယာ!
Tags: ဆုအခမ်းအနားများညီလာခံထိတွေ့ဆက်ဆံမှုညီလာခံမြှင့်တင်ရေးစည်းဝေးကြီးများအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ရပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအဖြစ်အပျက် hashtagအဖြစ်အပျက်စီမံခန့်ခွဲမှုဖြစ်ရပ်မြှင့်တင်ရေးပြပွဲပွဲတော်များတိုက်ရိုက်တွစ်တာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးညီလာခံထုတ်ကုန်လွှတ်တင်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲလူမှုရေးဖြစ်ရပ်အားကစားဖြစ်ရပ်များကုန်သွယ်မှုပြပွဲတွစ်တာtwitter လောကဝတ်Webinar ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုwebinar မြှင့်တင်ရေး
Facebook, Twitter, Pinterest နှင့် LinkedIn တို့တွင်အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်သောနည်းဗျူဟာများ